Fouga Magister CM170 v1.1 FSX - Freeware
Ny Fouga Magister CM170 dia aseho ao amin'ny 3 dikan-:
- Ny "ambany kokoa Serials maro" Bible (cfN ° 62)
- Ny "ambony serial isa" Bible (cfN ° 412), miaraka amin'ny miavaka "volombava" (Vor tandrok'ilay). Ity Variant Anisan'izany ny "fiaviana roa fanaraha-maso" (DC) modely izay azo piloted avy amin'ny seza aoriana.
- Ny "Patrouille de France" (PAF) Bible, ny 1966 loko rafitra.
Toy ny simplification, modely rehetra mampiasa MarboreVI fitaovana, ka izy ireo ihany fampisehoana. Raha ny marina, ny ambany aircrafts serial isa ireo equiped amin'ny fitaovana matanjaka kokoa (MarboreII). Ankoatra izany, maro fahasamihafana eo amin'ny tena fiaramanidina sy ny modely dia intoduced mba ho mora kokoa ny fampiasana ny virtoaly mpanamory:
- Ny orona no steerable gearwheel raha ny tena Fouga dia noroahina tamin'ny rantsan-tongotra tany whith freins
- Ny GPS, ny DME sy mandeha ho azy mpanamory dia nampidirina ao ny modely
- Maro jiro fanampiny dia apetraka eo amin'ny tontonana hanamaivana virtoaly manidina (mikopaka, fipetrahana fitaovana,
Ny Fouga Magister CM170 dia roa-toerana, kambana-fitaovana miaramila fiaramanidina fiaramanidina mpanazatra. Izany no developped avy amin'ny fiaraha-miasa eo Ramatoa Robert Castello sy Pierre Mauboussin, frantsay Fouga ingeniors ny orinasa, fa ny airframe, ary Mr Joseph Szydlowski, Turbomeca orinasa mpanorina, fa ny fiaramanidina milina.
Ny sidina voalohany nitranga tamin'ny Jolay 1952 23 amin'ny Léon Bourrieau toy ny fitsapana mpanamory fiaramanidina. Dia voafidy teo 24 aicrafts hafa natolotra ny OTAN consultatif vondrona ho an'ny fanofanana ny sidina. Ny famokarana Nanomboka tamin'ny 1956 any Frantsa (misesy avy Fouga orinasa, dia Air Fouga, sy ny Potez, izay farany lasa ny anjara ofAerospatiale) ary koa amin'ny alalan'ny firenena maro (Alemaina, Failandy, ny Isiraely....). Rehefa tapitra ny sixties, manodidina ny arivo no novokarina aircrafts.
Ny frantsay Airforce no tena mpampiasa ny Fouga Magister eo 1956 sy 1996 amin'ny tokony ho 400 aircrafts sy roa ora fhight an-tapitrisany. Telopolo aircrafts ny tafika an-dranomasina dika, antsoina hoe Fouga Zephyr CM175, dia naorina ho an'ny tafika an-dranomasina frantsay. Up ny 12000 pilotes dia nampiofana ny Fouga Magister manerana izao tontolo izao. Aerobatic ekipa maro no nampiasa ny Fouga Magister, indrindra fa ny frantsay fisafoana "Patrouille de France" (PAF) teo 1964 sy 1980.
General Toetra mampiavaka:
Endri-javatra manokana ny airframe dia ahitana ny 110 ° zoro Lolo rambony
Fivelaran'ny elany: 12,15 M
Haavony: 2,80 M
Marbore VI milina Bible (voalohany Marbore II fiaramanidina nanana fitaovana amin'ny fampisehoana ambany):
Esory faobe ambony indrindra: 2900 kilao
Maximum naroson'ilay (haavon'ny ranomasina): 480daN (x2)
Maximum RPM: 21500 ny rpm dia
Maximum ny hafainganam-pandeha: 400 Kts
Maximum mạch: 0.82
(Loharanom-baovao: Fitehirizam-taratasy tafiditra ao amin'ny Download)
2D Panels sy gauges: Jean-Pierre Langer
Fouga PAF tamin'ny Corse nosy (FranceVFR sceney)
Mpanolo-tsaina ara-teknika: Henri Guyot (teo aloha ny mpampianatra Fouga Magister mpanamory)
Downloads 18 974
Noforonina 31 Jan 2010